Twiiter ga -ewepu foto na URL site na njedebe agwa 140 | Androidsis
Twitter agaghị agụta foto na njikọ dị n'etiti ogo agwa 140
Twitter nọgidere na -achọta ụzọ nwee ike melite netwọkụ mmekọrịta gị nke obere ozi iji nye ya atụmatụ ka mma na ya. Ma ọ bụ ya ututu a Anyị ekwuola banyere egwuregwu ọhụrụ ahụ mgbe a na -anwale ọnụọgụ ọnụọgụ ndị sonyere Twitter maka gam akporo yana nhọrọ ịmalite Periscope site na bọtịnụ egosipụtara maka ya.
Ugbu a bụ mgbe Twitter chọrọ inyekwu nnwere onwe nye ndị ọrụ mgbe ha na -ede ogologo ozi. Companylọ ọrụ ahụ ga-akwụsị ịgụta onyonyo na njikọ dị ka akụkụ nke njedebe mkpụrụedemede 140 na posts, onye dị nso na Twitter kwuru.
Mgbanwe a nwere ike eme maka izu abụọ na -abịa dị ka e hotara site n'otu isi mmalite ahụ na -achọghị ikpughe onye ọ bụ. Njikọ na -eduga ugbu a ruo mkpụrụedemede 23 ọbụlagodi mgbe Twitter na -ebelata ha na akpaghị aka.
para inwe ike gafee oke ahụ nke ndị na -agụ akụkọ, ndị ọrụ na -echepụta ha mgbe niile ka ha nwee ike ịmalite ozi ogologo oge, dị ka ọ dị na webụsaịtị ndị ahụ enwere ike ịgbasa ọdịnaya ya site na njikọ. Na ihe ị ga -ekwu gbasara nseta ihuenyo nke ederede ogologo ma ọ bụ izipu ọtụtụ tweet otu n'otu, nke na -emerụ ahụmịhe onye ọrụ n'amaghị ama. Ahụmịhe chọrọ imeziwanye Twitter n'onwe ya na mbata akụkọ dị iche iche n'izu ndị na -adịbeghị anya.
Netwọk mmekọrịta obere ozi na-enwe mgbe niile ihe kpatara ị jiri nọrọ n'obere ozi ndị ahụ nke na -amanye ndị ọrụ ka ha chịkọta ha n'ụzọ nke na ebumnobi na ihe ha chọrọ ikwupụta na -ejide na -akụghị gburugburu ọhịa. Mana n'ihi etu usoro Twitter n'onwe ya si agbanwe, mgbanwe n'akụkụ a na -amalite ịbịarute. Ọ dị ka Instagram na mbido ya na foto ya n'ụdị square, okwuntughe nke mere na ugbu a agbanweela kemgbe oge ọkọchị nke 2015.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Twitter agaghị agụta foto na njikọ dị n'etiti ogo agwa 140
Sergi (Mr. gam akporo) dijo
Ọ bụ ọganihu
Zaghachi Sergi (Maazị gam akporo)
gaa ọ bụ oge
Zaghachi Juan Carlos Camacho Hernandez
Agbanyeghị na nkọwa ahụ mere ka ọ pụọ iche ... echere m na ha ga -eme nke ọma. Ọ bụ oge iji nwekwuo nnwere onwe ma a bịa n'ikwupụta echiche gị
A chọrọ ihe dị ka nke a ogologo oge. Ọ dị ka n'ikpeazụ etinye batrị.
Ndewo twitter nke ọma facebook
Zaghachi Pablo Rovira Girona
Lenovo ọkwa Moto G4 na Moto G4 Plus